केसी दोश्रोपटक सगरमाथा चढ्ने::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, ७ भदौ – दृष्टीबिहिन अमिट केसी दोश्रोपटक सगरमाथा चढ्ने भएका छन् । जैमिनी नगरपािलका वडा नं. ४ का अमिट केसीले आगामी बैशाखमा सगरमाथा चढ्ने तयारी गरेका छन् । पहिलो पटक दुइ बर्षअघि चढ्न जाँदा प्राविधिक कारणले चुचुरोमा पुग्न नसकेर फर्केका केसीले चुचुरो पुग्ने सपना पुरा गरेरै छाड्ने बताए । उनले सगरमाथा चुचुरोमा पुगे भने नेपालको नाम राख्न सफल हुनेछन् । यसअघि अमेरिकी दृष्टीविहिन ‘एरिक एहिङ मेयर’लेपनि सगरमाथाको आठ हजार आठसय मीटर उचाईमा पुगेर फर्केको रेकर्ड छ । दुइ बर्ष अघि सगरमाथा चढ्न गएका केसी साउथ पोलमा पुगेर अक्सिजन सकिएपछि फर्केका थिए । ८ हजार मीटरको साउथ पोलमा मौषम खरावीले २४ घण्टासम्म बस्नु परेपछि उनको अक्सिजन सकिएको थियो । तत्काल अक्सिजन थप्न २ हजार डलर लाग्ने भएपछि पैसा र तत्कालै अक्सिजन नपाएर उनी फर्केका थिए ।
अघिल्लो बर्ष नेपाल सरकारले कानून संशोधन गरेर सगरमाथा चढ्न रोक लगाएपछि उनको चाहना अलपत्र परेको थियो । केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएर सरकारको निर्याय फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक ईजलासले अपांगले पनि सगरमाथा चढ्न पाउने फैसला गरेको छ । यो फैसलाले केसी उत्साही भएका हुन् । पर्वतारोहण नियमाबलीको नियम ३ संशोधन नगर्न रिट परेपछि संवैधानिक ईजलासले अपांगहरुपनि सगरमाथा चढ्न पाउने फैसला गरेको हो । समानताको हक बिपरित सरकारले नियम संशोधन गरेको भन्दै केसीले दिएको रिटमा अनन्तराज लुईटेल र बिकास भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
सबै प्रकारका प्रशिक्षण लिईसकेको, अन्य साना हिमाल पनि चढेको र सगरमाथाको पनि ८ हजार मीटरमा पुगेकोले सरकारको अनुमति पाएपछि जान सक्ने उनले बताए । ‘अब पैसाको समस्या हो, जुटाएपछि जाने योजना छ’ केसीले भने, ‘६० हजार डलर भए बन्दोबस्तीका सामाग्री, गाइड खर्च र खाना समेत पुग्छ ।’ त्यसका लागि उनी अहिले आर्थिक संकलन अभियानमा जुटेका छन् ।
बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले उनको अभियानमा साथ दिने आश्वासन दिएको छ । ‘सक्दो सहयोग गर्ने भनेका छौं’ संघका अध्यक्ष युवराज राजभण्डारीले भने, ‘हाम्रै जिल्लाको भाईले सगरमाथा चढ्दा हामीलाई पनि गर्वको कुरा हुनेछ ।’ यस अघि लामो प्रशिक्षण लिएकोले यो पटक भने छोटो समय भए पुग्ने केसीले बताए । ‘अघिल्लो पटक प्रकृतिले साथ दिएन, अब जसरी पनि पुग्छु’ उनले भने । यसअघि अमेरिकी दृष्टीविहिन ‘एरिक एहिङ मेयर’लेपनि सगरमाथाको आठ हजार आठसय मीटर उचाईमा पुगेर फर्केको रेकर्ड छ ।
शारिरीक रुपमा अपांग भएपनि उनको साहस भने अनौठो छ । धेरैले सगरमाथा जस्तो साहस बटुल्ने कुरा गर्छन्, उनी सगरमाथामै पुगेर चुचुरोमा पुग्न नपाएको पिडाले फेरी कस्सिएको बताए । भन्छन्, ‘दृष्टीविहिन भएपनि सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेरै छाड्छु ।’ यसअघि बिदेशी एकजना दृष्टीविहिनले चुचुरोमा नपुग्दै फर्केको जानकारी पाएपछि उनमा पुगेरै छाड्ने चाहना पलाएको हो । सगरमाथा चढ्ने अभियानकै कारण उनले सदरमुकामको रामरेखा निमाविमा अध्यापन गर्दागर्दै छाडेका थिए । सगरमाथा जानुअघि उनले ६ हजार २ सय मीटर अग्लो सोलुखुम्बुको आइसल्याण्ड पिक पनि चढीसकेका छन् ।
घरपरिवारबाटै बोझ सम्झने अपांगलाइ सबैको प्रेरणाको श्रोत बनाउन सक्नुपर्छ भनेर उनले साहसिक कदम उठाएको बताए । ‘हामी अपांग होइन, फरक क्षमता भएका व्यक्ति हौं’ उनले भने, ‘यसो भनिरहँदा के फरक क्षमता छ भनेर हामीले समाजलाइ प्रमाणित गरिदिनुपर्नेछ ।’ उनले ‘सर्पोट एड्भान्स तालिम’ समेत लिएकोले पैसा जम्मा गर्न सके दुइ महिनाको ‘फिजिकल फिट्नेस’ तालिम लिएर सगरमाथा चढ्न सक्ने दावी गरे । सगरमाथा चढ्न सक्ने हिम्मत भएकोले नेपाल पर्वतारोहण संघले सफल आरोहीको प्रमाणपत्र पनि दिइसकेको छ ।